Dad rayid ah oo ku dhintay weerarkii cirka ee Jilib - BBC Somali
Dad rayid ah oo ku dhintay weerarkii cirka ee Jilib
Image caption Degaanka Jilib
Dad lagu qiyaasay guud ahaan ilaa dhawr iyo toban qof ayaa ku dhintay, kontomeeyana way ku dhaawacanay weerar xagga cirka ah oo shalay diyaaradaha Kenya ku qaadeen degaanka Jilib.
Heyadda daawooyinka iyo caafimaadka ee MSF ayaa sheegtay inay dadkaasi dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ay ku jiraan dad rayid ah oo ay ka mid yihiin dumar yo carruur. MSF waxay intaasi ku dartay inay dhinteen inta ay ka war hayaan ilaa shan qof oo rayid ah.
Weerarkani waxaa la sheegay inuu ka dhacay xerooyin ay ku jiraan dad ku soo barakacay abaarihii gobollada koonfureed ee Somalia, xeerooyinkaasi oo ku yaal degaanka Jilib.
Kenya waxay dhinaceeda ka sheegtay in weerarkani ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay joogaan miliishiyada al-Shabaab, kana dileen ilaa 10 ka mid ah Al Shabaab. Waxayan Kenya beenisey inay diyaaradahoogu dileen dad rayid ah.